Yakavanzika Mutemo - BullyingCanada
/ Yakavanzika Chirongwa
Uyu mutemo unoshanda kune ruzivo rwemunhu ari kutorwa kubva BullyingCanada's vanopa uye vanogona kupa.
Isu takazvipira kuchengetedza ruzivo rwemunhu wevanopa uye vanogona kupa. Iyi Yakavanzika Policy inopa ruzivo nezve matorero atinoita, kushandisa, kuburitsa uye kuchengetedza ruzivo rwemunhu. Iyi Yakavanzika Policy inotsanangurawo kuti mupi anogona kutibata sei nemibvunzo, uye kuti munhu angakumbira sei kuita shanduko kana kudzima chero ruzivo rwemunhu rwatingave tinarwo pamusoro pavo.
Chivimbiso chedu kwauri
BullyingCanada yakazvipira kuchengetedza kuvanzika kweruzivo rwemunhu rwevanopa, vanozvipira, nhengo, uye chero ani zvake ane chekuita nesangano redu. Isu tinokoshesa kuvimbwa kweavo vatinobata navo, uye neruzhinji, uye tinoziva kuti kuchengetedza kuvimba uku kunoda kuti tive pachena uye nekuzvidavirira pamabatiro atinoita ruzivo rwatinogovaniswa.
Mukati memabasa edu akasiyana-siyana uye mabasa, tinowanzounganidza uye kushandisa ruzivo rwemunhu. Ani naani watinotora ruzivo rwakadaro kubva kwaari anofanira kutarisira kuti achanyatsochengetedzwa uye kuti chero kushandiswa kweruzivo urwu kunoenderana nemvumo. Maitiro edu ekuvanzika akagadzirirwa kuita izvi.
BullyingCanada yakazvipira kuchengetedza kuvanzika kwevanobatanidzwa. Chinonyanya kukosha: Kodzero yako yekuvanzika uye kuvanzika ichachengetedzwa.
Kutengeserana kwetsamba dzetsamba pakati pemasangano ane mukurumbira akanyoreswa anobatsira
Kuti tibatsire kutsvaga vatsigiri vatsva uye kushandisa zvirongwa zvedu zvekutsvaga mari zvinodhura, isu dzimwe nguva tinotengeserana chikamu chidiki chedu yakananga tsamba yevanopa tsamba nemamwe anoremekedzwa uye ane pfungwa dzakafanana. Isu tinongodaro mushure mekunge vanopa vawana mukana wekuramba kutora chikamu mune iyi runyorwa shanduko. Vanopa vanogona kubuda muchirongwa ichi chero nguva.
Nekubvuma kutibvumira kuchinjanisa ruzivo rwevanopa vanopihwa nekuzvidira, vanotibatsira kuwana mazita matsva angangove evatsigiri uye rutsigiro rutsva rwebasa rakakosha, risingabatsiri. Zvinyorwa zvetsamba zvinotengeswa zvisingazivikanwe kuburikidza ne3rd-party list broker uye anoshandiswa kutumira zvikumbiro zvetsamba zvakananga. Aya mabhureki emazita anodiwa kuti ave nechokwadi chekuti mvumo yakakodzera yawanikwa nevaridzi vezita kuti vashandise mazita ari pane rondedzero.
Mamwe masangano anobatsira anongodzidza zita nekero yevanopa vedu kana BullyingCanada vabatsiri vanobvuma kupa mupiro kune sangano rinobatsira iro ratakachinjana naro matsamba etsamba. Saizvozvowo, BullyingCanada hazviziviswe mazita ari pamazita atinotsinhanisa kusvikira mupiro kune imwe sangano afunga kuita mupiro BullyingCanada.
Kuwana ruzivo pamusoro pevamwe vanopa
Isu tichafara kuzivisa vanopa nezvekuvapo, chero kushandiswa, uye kuburitswa kweruzivo rwemunhu, uye nekupa mukana kune iyo ruzivo rwemunhu, zvichienderana nekusarudzika kwakapihwa nemutemo, mukati me30 (makumi matatu) mazuva ekutambirwa kwechikumbiro chakanyorwa chinotungamirwa. ku:
Kutsanangura ruzivo rwemunhu
Ruzivo rwemunhu chero ruzivo runogona kushandiswa kusiyanisa, kuona kana kubata munhu chaiye. Ruzivo urwu runogona kusanganisira zvinofungwa nemunhu kana zvaanotenda, pamwe chete nezvechokwadi nezve, kana zvine chekuita nemunhu, kana zvikapihwa BullyingCanada kuburikidza neongororo kana hurukuro. Kunze kwe: ruzivo rwebhizinesi rekuonana uye rumwe ruzivo rwunowanikwa pachena, senge mazita, kero, uye nhamba dzenhare sezvakaburitswa mumadhairekitori enhare, hazvitariswe seruzivo rwemunhu.
Kana munhu anoshandisa ruzivo rwake rwekumusha senge ruzivo rwekufonera bhizinesi zvakare, isu tinofunga kuti ruzivo rwekufonera rwunopihwa irwo ruzivo rwebhizinesi, uye nekudaro haruna kuchengetedzwa seruzivo rwemunhu.
Matorero atinoita ruzivo rwemunhu
BullyingCanada inounganidza ruzivo rwemunhu nezvemunhu chete kana rwapihwa nekuzvidira. Kazhinji, isu tichatsvaga mvumo yekushandisa kana kuburitsa ruzivo rwemunhu panguva yekuunganidza. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, tinogona kuda kushandisa ruzivo rwemunhu rwakambounganidzwa nechinangwa chitsva (kureva chinangwa chisina kutaurwa panguva yaiunganidzwa ruzivo). Mumamiriro ezvinhu aya, tichazivisa munhu wacho kuburikidza neemail kana tsamba uye topa mukana wekubuda mukushandiswa kutsva kwakadaro.
BullyingCanada inounganidza ruzivo rwemunhu kana mupiro kana chitsidzo chaitwa, rinhi BullyingCanada zvinhu zvinokumbirwa, kana kushandisa mamwe ewebhu masevhisi edu.
Hatidi, semamiriro ekudyidzana nawo BullyingCanada, inoda mvumo yekuunganidza, kushandiswa, kana kuburitswa kweruzivo rwunopfuura rwunodiwa kuzadzisa zvinangwa zvakatsanangurwa uye zviri pamutemo izvo ruzivo rwuri kupihwa.
Ruzivo rwemunhu rwakaunganidzwa ne BullyingCanada inochengetwa muchivimbo chakasimba. Vashandi vedu vanopihwa mvumo yekuwana ruzivo rwemunhu zvichienderana chete nekuda kwavo kubata neruzivo nekuda kwechikonzero (s) chaakawana. Dziviriro iripo kuitira kuti ruzivo harwutaurirwe kana kugovaniswa zvakanyanya kupfuura zvinodiwa kuti chinangwa chawakaunganidzirwa chizadzike. Isu tinotorawo matanho ekuona kuti kuvimbika kweruzivo urwu kunochengetedzwa uye kudzivirira kuti risarasike kana kuparadzwa.
Ruzivo rwemunhu rwatinounganidza runoshandiswa kuita kutengeserana kwakakumbirwa kana kubvumidzwa neanopa. Izvi zvinogona kusanganisira kushandisa ruzivo rwemunhu kugadzirisa chipo, kutumira ruzivo kana zvinhu zvakakumbirwa, kunyoresa kune chimwe chezviitiko zvedu, kuchengetedza vanhu ruzivo nezve. BullyingCanada zviitiko nenhau, kumbira rutsigiro, uye ita zvese zvinodikanwa kukudziridza nekuchengetedza hukama hwedu nevatsigiri.
Pamipiro yechiuru chemadhora ($1,000) kana kupfuura, BullyingCanada inoburitsa mazita evanopa pawebhusaiti yayo, nemvumo yevanopa. Vese vanopa vane zvipo zvechiuru chemadhora ($1,000) kana kudarika vasingade kuti zita ravo ribudiswe vanokumbirwa kuratidza zvavanoda pafomu ravo rekupa kana kutibata parunhare pan (877) 352-4497, kana email pa. [email inodzivirirwa] kana netsamba pa: 471 Smythe St, PO Box 27009, Fredericton, NB, E3B 9M1.
BullyingCanada inogona kugovera ruzivo rwemunhu nemunhu wechitatu mapato ari kuita kuti atibatsire mukupa masevhisi kuita chimwe kana zvimwe zvezvinangwa zvinotsanangurwa pamusoro. Ava vanopa masevhisi vanorambidzwa kushandisa ruzivo rwemunhu kune chero chinangwa kunze kwekupa rubatsiro urwu uye vanosungirwa kuchengetedza ruzivo rwemunhu rwainogamuchira kubva kwatiri kana kuwana uye kutevedzera misimboti yekuvanzika yakatsanangurwa muChakavanzika Policy.
Isu tinogara tichipa vanhu vatinobata nemukana wekusarudza kusapihwa ruzivo rwavo nekuda kwezvinangwa zvinopfuura izvo zvakaunganidzwa zvakajeka. Kana chero nguva, munhu angade kuti ruzivo rwavo ruvandudzwe kana kubviswa kubva kune imwe yetsamba yedu yetsamba, vanokumbirwa kutitumira email pa. [email inodzivirirwa] kana kutifonera pa (877) 352-4497 uye isu tichaita gadziriso (s) kune ruzivo rwemunhu mukati me30 (makumi matatu) mazuva.
Kana munhu asina kubuda kubva pakugamuchira ruzivo rwekushambadzira kubva kuhofisi yedu yenyika, tinogona kushandisa ruzivo rwekuti tipe ruzivo nezve. BullyingCanada budiriro kana zviitiko, zviitiko zvinouya zvekuunganidza mari, kana mikana yekutsigira.
Webhusaiti uye zvemagetsi kutengeserana
Paunoshanyira webhusaiti yedu pa BullyingCanada.ca tinogona kuunganidza ruzivo rusiri rwemunhu. Isu tinogona kuunganidza nekushandisa IP kero kuongorora mafambiro, kutonga saiti, kuteedzera mafambiro evanopa, uye kuunganidza ruzivo rwehuwandu hwehuwandu hwehuwandu hwekushandisa. Isu hatibatanidzi makero eIP kune ruzivo rwunozivikanwa nemunhu.
Isu tinoshandisa password protocol uye encryption software kuchengetedza ruzivo rwemunhu uye rumwe ruzivo rwatinogamuchira kana chigadzirwa kana sevhisi inosanganisira yekutengeserana yakumbirwa uye/kana kubhadharwa pamhepo. Yedu software inogadziridzwa nguva nenguva kuti iwedzere kuchengetedzwa kweruzivo rwakadaro.
Webhusaiti yedu ine zvinongedzo kune mamwe mawebhusaiti. Ndapota zivai izvozvo BullyingCanada haina mhosva kune zvakavanzika maitiro emamwe mawebhusaiti akadaro. Isu tinokurudzira vanopa vedu kuti vazive pavanosiya webhusaiti yedu uye kuti vaverenge mutemo wekuvanzika wewebhusaiti yega yega inounganidza ruzivo rwemunhu.
Makuki madiki mameseji mafaira anogona kushandiswa newebhusaiti kuona vanodzokorora vashandisi uye kurerutsa iyo inoenderera yekuwana uye kushandisa webhusaiti. BullyingCanada anoita kwete shandisa ruzivo rwunofambiswa nemakuki kune chero chinangwa chekushambadzira kana chekushambadzira, uye ruzivo irworwo haruna kugovaniswa nechero mapato echitatu. Vashandisi vanofanira kuziva izvozvo BullyingCanada haigone kudzora kushandiswa kwemakuki nevashambadziri kana vechitatu mapato.
Kune avo vasingade ruzivo rwakaunganidzwa kuburikidza nekushandiswa kwekiki, mabhurawuza mazhinji anobvumira vashandisi kuramba kana kugamuchira makuki. Ndokumbira utarise kuti makuki angave ari madikanwa kupa mamwe maficha aripo pane ino saiti.
Tinochengetedza sei ruzivo rwemunhu
BullyingCanada inotora matanho ane musoro ezvokutengeserana kuchengetedza ruzivo rwemunhu kubva pakusvika kusingatenderwi uye kuchengetedza kurongeka uye kushandiswa kwakakodzera kweruzivo kuburikidza nemaitiro akakodzera emuviri, hunyanzvi, uye sangano. Zvese zvepamhepo zvekutengesa uye mipiro pawebhusaiti yedu zvinoitika kuburikidza neyakachengetedzeka, yakavanzika, uye yakachengeteka sisitimu inochengetedza ruzivo rwemunhu.
Vese vashandi vedu, vanozvipira, uye vanopa masevhisi vanosungirwa kutevedzera zvirevo zveChakavanzika Policy uye vanosungirwa kuchengetedza zvakavanzika ruzivo rwavanokwanisa kuwana pavanenge vachiita mabasa avo. Ese masisitimu edu anodzivirirwa nepamusoro-mhando firewall uye vese vashandisi vanofanirwa kushandisa password.
Kuchengeta uye kuraswa kweruzivo rwemunhu
BullyingCanada inochengeta ruzivo rwemunhu kwenguva yakareba sezvinodiwa kuzadzisa chinangwa (s) chayakaunganidzirwa uye kutevedzera mitemo inoshanda.
Isu tinogara tichiongorora maitiro edu ekuvanzika kwezviitiko zvedu zvakasiyana uye kugadzirisa mutemo wedu. Ndokumbira utarise webhusaiti yedu www.bullyingcanada.ca nguva nenguva yeruzivo rwemaitiro edu echizvino-zvino.
Nzira yekubuda, kukumbira kuwana, kana kugadzirisa ruzivo rwemunhu
BullyingCanada inoita nhamburiko dzekutengesa kuchengetedza mafaera akazara, ari-azvino, uye akarurama. Kana munhu akashuvira kuwana, kugadzirisa kana kugadzirisa ruzivo rwemunhu, kukumbira kubviswa kubva patsamba yedu yetsamba, kana kukurukura nesu nyaya yekuvanzika, tapota taura nesu Privacy Officer netsamba panhamba dzinoti 471 Smythe St, PO Box 27009, Fredericton, NB, E3B. 9M1 kana kufonera (877) 352-4497 kana kutumira e-mail ku [email inodzivirirwa]
Rumwe ruzivo rwekuvanzika uye kodzero dzako maererano neruzivo rwemunhu runogona kuwanikwa pawebhusaiti yePrivacy Commissioner weCanada pa. www.priv.gc.ca/en/
Ruzivo uye chikumbiro chekuvandudza
Sangano redu rakazvipira kuchengetedza kuvanzika kweruzivo rwemunhu rwevanopa, vanozvipira, vashandi, nhengo, vatengi, uye vamwe vese vane chekuita. Isu tinokoshesa kuvimbwa kweavo vatinobata navo, uye neveruzhinji, uye tinoziva kuti kuchengetedza kuvimba uku kunoda kuti tive pachena uye nekuzvidavirira pamabatiro atinoita ruzivo rwawakasarudza kugovana nesu.
Vanhu vanogona kutarisa ruzivo rwavo rwatinarwo parekodhi kuti vaone, vagadzirise uye vagadzirise, uye kuti chero ruzivo rwechinyakare rubviswe.
General donor uye kero yemutengi uye ruzivo rwekufonera runogona kuvandudzwa zviri nyore nekudzorera kadhi revanopa nguva dzose neruzivo rwakagadziridzwa kana nekufona. BullyingCanada toll-yemahara pa (877) 352-4497 uye uchikumbira shanduko kune faira revanopa.
Kuchinja kweruzivo rwevanopa uye nevatengi, pamwe nezvikumbiro zvemakopi emafaira ega ega, zvinofanirwa kunyorwa kwatiri pa:
Ndokumbira utarise kuti kana mamwe mafaera emunhu akakumbirwa, panogona kunge paine ruzivo rwezvakavanzika zvine chekuita nevamwe vanhu kana ruzivo rwakavanzika kune BullyingCanada yakabatanidzwa mune iyo faira. Mukutevedzera BullyingCanada Zvakavanzika Policies, mafaera aya haagone kukopwa kana kuburitswa; zvisinei, chero ruzivo rwechokwadi maererano nemunhu ari kukumbira faira rake pacharwo ruchawanikwa.
Mumamiriro ezvinhu akajairwa, zvikumbiro zvese uye zvigadziriso zvichapedzwa mukati memazuva makumi matatu ekugamuchira chikumbiro.
Zvinonetsa uye zvichemo
BullyingCanada yakazvipira kubata vanopa, vanozvipira, vashandi, nhengo, vatengi, uye vamwe vese vane chekuita neruremekedzo uye nehanya. Pasinei nekuedza kwakanakisisa, pachava nenguva apo kukanganisa uye kusanzwisisana zvinogona kuitika. Chero mamiriro ezvinhu, kugadzirisa dambudziko kusvika pakugutsikana kwevose vanobatanidzwa ndicho chinonyanya kunetseka BullyingCanada. Unogona kutibata nekunyora pa:
Ndokumbirawo uve nechokwadi chekuisa zvinotevera mumeseji yako kana tsamba:
Kero uye nhamba yefoni kwaunoda kuwanikwa;
Mamiriro ekunyunyuta; uye
Tsanangudzo dzine chekuita nenyaya yacho uye wawakatotaura naye nyaya yacho.
Kuedza kuchaitwa kupindura kune zvinonetsa uye zvichemo nenguva.
Rumwe ruzivo nezve kuvanzika uye kodzero dzako maererano neruzivo rwako pachako runogona kuwanikwa pawebhusaiti yePrivacy Commissioner weCanada pa. www.priv.gc.ca/en/